News & Blog - စာမျက်နှာ3- Austin Partners in Education
APIE ၏အချပ်: ဇန်နဝါရီလ 2019 သတင်းလွှာ
ပညာရေး၌ Austin အပေါင်းအဖေါ်များ @austinpartners @austinpartners စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများမှကြိုဆိုပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ရလဒ်များကိုမျှဝေခြင်း၊ APIE ကိုထောက်ခံသူများကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်နှစ်သစ်ကိုစတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်
ကဗျာ	ဇန်နဝါရီ 15, 2019
ကဗျာ	ဒီဇင်ဘာ 17, 2018
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: အောက်တိုဘာလ 2018 သတင်းလွှာ
ပညာရေးဆိုင်ရာ Austin မိတ်ဖက်များ @austinpartners @austinpartners ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအစီအစဉ်များသည်တရားဝင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါသည်။ ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများမှသည်ဝန်ထမ်းများအထိ
ကဗျာ	အောက်တိုဘာ 18, 2018
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: သြဂုတ်လ 2018 သတင်းလွှာ
ပညာရေးဆိုင်ရာ Austin Partners @austinpartners @austinpartners ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Cathy Jones မှ APIE မှစာသင်ခန်းအတွင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင်နှစ်တွင်ကြိုဆိုပါသည်။ ယနေ့မှတ်ပုံတင်ပါ! ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်
ကဗျာ	မေလ 28, 2018
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: ဇွန်လ 2018 သတင်းလွှာ
ပညာရေးဆိုင်ရာ Austin အပေါင်းအဖေါ်များ @austinpartners @austinpartners ကျောင်းသည်နွေရာသီအဘို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်, သို့သော် APIE သည်ယခုတိုင်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Summer Wait List တွင်ကြည့်ရှုရန်အောက်တွင်ဖတ်ပါ
ကဗျာ	ဇွန် 12, 2018
ပညာရေးတွင် Austin အပေါင်းအဖေါ်များ @austinpartners @austinpartners Aprilပြီလသည် National Volunteer Appreciation Month ပါ။ APIE ကိုယ်စားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးသည့်စာသင်ခန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကျောင်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကဗျာ	ဧပွီ 27, 2018
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 သတင်းလွှာ
APIE မှာဒီနှစ်ဟာနှစ်သစ်ကူးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစပဲ! ကျွန်ုပ်တို့၏ STEM ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီး၊ Math Classroom နည်းပြများကိုပိုမိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်
ကဗျာ	ဖေ ‌ ဖော်ဝါရီလ 23, 2018
ကဗျာ	ဒီဇင်ဘာ 11, 2017
အောက်တိုဘာလသတင်းလွှာ - APIE ၏တစ်ပိုင်းတစ်စ၎င်းသည် AISD တစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်စာသင်နှစ်အတွက်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့
ကဗျာ	အောက်တိုဘာ 26, 2017
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Cathy Jones မှ APIE စာသင်ခန်းမှ 2017-2018 စာသင်နှစ်မှကြိုဆိုပါသည် ယနေ့မှတ်ပုံတင်ပါ!
ကဗျာ	ဖေဖော်ဝါရီ 31, 2017
အမြန်ကိုက်၏ APIE | စာသင်ခန်းနည်းပြများအတွက်သိကောင်းစရာများသင်၏အချိန်ကိုယူပါ - သင်၏ကျောင်းသားများကိုသိကျွမ်းပြီးနည်းပြ၏ပထမနေ့တွင်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပါ၊ မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း - မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းအဖြစ်ကျောင်းသားများကိုသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ပေးပါ။
ကဗျာ	ဇွန် 26, 2017
APIE နွေ ဦး ရာသီဖြစ်ပျက်
ကဗျာ	မတ် 23, 2017